Editor Two, Author at My Doctor - Page2of4" );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အနာကျက်နှေးခြင်းနဲ့ ဆီးချိုရဲ့ပြဿနာ… ဆီးချိုရောဂါဆိုတာ ခန္တာကိုယ်က ဆီးချိုကိုထိန်းညှိပေးမယ့် Insulin ဟော်မုန်းကိုမထုတ်နိုင်လို့ (သို့) ထုတ်ပေမယ့်လည်း မသုံးနိုင်လို့ ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါတစ်ခုပါ။ ဆီးချိုရောဂါမှာ အနာဖြစ်ပြီဆိုရင် တော်တော်နဲ့ ပျောက်ဖို့ခက်တာ လူတော်တော်များများသိကြပါတယ်။ ဒါဆို ဘာလို့ ဒီလို ဆီးချိုရောဂါသမားတွေမှာ အနာကျက်တာနှေးရတာလဲ…. 1)…
ဆောင်းတွင်းနံနက်ခင်းမှာတံခါးလာခေါက်သောရင်ကျပ်ရောဂါ (Bronchial Asthma) ယခုလိုဆောင်းတွင်းနံနက်စောစာဆိုလျင် ရင်ကျပ်ရောဂါအခံရှိသူများအဖို့စိတ်ညစ်ရသည်မှာထုံးစံပင်။ နံနက်ခင်းလေအေးကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတုံ့ပြန်မှူလွဲကဲခြင်း(increased air way hyper responsiveness)ကြောင့် အသက်ရှူမဝပဲတရွှီရွှီအသံမြည်ကာ ရင်ကျပ်ရောဂါကိုခံစားရခြင်းပဲဖစ်ပါသည်။ ရင်ကျပ်ရောဂါဆိုတာကတော့(chronic airway inflammation) နာတာရှည်အဆုတ်လေပြွန်များ ရောင်ရမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပညာလေ့လာချက်များအရ မျိူးရိူးဗီဇကြောင့်လည်း ရောဂါကိုခံစားရပါတယ် ။…
အေးနေပြီဆိုတော့ သင့်ပန်းနာရောဂါပြန်မထအောင်…. ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါဆိုတာ အေးတဲ့အချိန်(အထူးသဖြင့် ဆောင်းရာသီ)တွေမှာ ကြပ်လေ့ရှိတဲ့ရောဂါတစ်ခုပါ။ အေးတဲ့ရာသီဥတုဟာ သင့်ပန်းနာရောဂါကို ပြန်ပြန်ထအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခုလိုဆောင်းအချိန်မှာ ပန်းနာရောဂါပြန်မထအောင်….. ပန်းနာရောဂါဆိုတာ အအေးမိတဲ့အခါ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်ခုခုဝင်တဲ့အခါ ထထကြပ်တတ်တဲ့အတွက် ဒီရောဂါတွေကူးစက်မခံရအောင် လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့သေချာဆေးကြောဖို့လိုပါတယ်။ ဖျားနာ၊ ချောင်းဆိုးနေတဲ့သူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေပြီး Mask တပ်ထားပါ။…
အခုဆိုရင် နှစ်သစ်ကူးတော့မယ့် ကာလအတွင်းကိုရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ကို တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် အရင်နှစ်တွေကလို အလုပ်တွေလုပ်ကြ /ခရီးတွေထွက်ကြဆိုတဲ့ အချိန်တွေလိုမဟုတ်ခဲ့ဘဲ Covid19 ဂယက်ကြောင့် အိမ်ထဲမှာများများနေကြရပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စကားတွေကို အများကြီးပြောခဲ့ရပါတယ်။ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း မိမိကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးသုံးသပ်ပြီး နောက်နှစ်သစ်ကို…
အမျိုးသားတွေဖြစ်တတ်ကြတဲ့ အူကျရောဂါဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ... ❗
အမျိုးသားတွေဖြစ်တတ်ကြတဲ့ အူကျရောဂါဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ… ❗ ♈ အမျိုးသားတွေပြောပြောနေတဲ့ အူကျနေတယ်ဆိုတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းကို တော်တော်များများသတိထားမိကြမှာပါ။ အမျိုးသားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့အူကျတယ်ဆိုတာ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားအားနည်းတဲ့နေရာကနေ အူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပြင်ကိုထွက်လာတာကိုခေါ်ဝေါ်ကြတာပါ။ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အူကျရောဂါခံစားနေရပြီဆိုရင်… ♈ ဆီးခုံရဲ့ ဟိုဘက်၊ ဒီဘက်မှာ၊ပေါင်ခြံမှာအလုံးပေါ်လာပြီးခပ်လေးလေးခံစားလာရမယ်၊ တချို့က ရှည်ရှည်မျောမျောပုံစံရှိသလို တချို့က စက်ဝိုင်း…
Emergency ပုံစံပေမယ့် Emergency မဟုတ်တဲ့ ဒီရောဂါ....
Emergency ပုံစံပေမယ့် Emergency မဟုတ်တဲ့ ဒီရောဂါ…. ⚕️ Emergency ဆိုတာဟာ ချက်ချင်းသာ ကုသမှုမခံယူရင် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုခေါ်ကြတာပါ။ နှလုံးရောဂါကြောင့် အမောဖောက်ပြီးမောတာမျိုးက Emergency လို့ခေါ်နိုင်ပေမယ့် မောနေတာဟာ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ASR ရောဂါကြောင့်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ Emergency လုံးဝမဟုတ်တော့ပါဘူး။…
Heart attack တောင်ရသွားနိုင်တဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်လွန်ကဲတဲ့ရောဂါတစ်ခု...
Heart attack တောင်ရသွားနိုင်တဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်လွန်ကဲတဲ့ရောဂါတစ်ခု… စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တာဟာ ပုံမှန်လူတွေလည်းဖြစ်တတ်ကြတယ်ဆိုပေမယ့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲလွန်းတဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Panic disorder မှာတော့ သွယ်ဝိုက်ပြီး နှလုံးကိုထိနိုင်လို့ Heart attack တောင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ Heart attack ကို တိုက်ရိုက်ရစေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမယ့် စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ…
စိတ်ကစဥ့်ကလျားရောဂါဖြစ်ခြင်းရဲ့ အစပြုရာ…❗❗❗ စိတ်ကစဥ့်ကလျားရောဂါဆိုတာ ပုံမှန်အတိုင်းတည်ရှိနေတာနဲ့ကွဲထွက်နေတတ်တဲ့ရောဂါတစ်ခုပါ။ တကယ်မရှိတဲ့အသံတွေကို ကြားယောင်နေတာမျိုး၊ တကယ်မရှိတဲ့ အရာတွေကိုမြင်ယောင်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ဂယောင်ခြောက်ခြားရောဂါတစ်မျိုးပါပဲ။ ဒီလို စိတ်ကစဥ့်ကလျားရောဂါဘာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုရင်….. 1) မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ♊ ဒီလို စိတ်ကစဥ့်ကလျားရောဂါမျိုးဟာ မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့ မိဘ၊ မောင်နှမသားချင်းတွေမှာဖြစ်တဲ့သူရှိရင် ကိုယ့်ဆီမှာလည်း ဖြစ်ဖို့အလားအလာ များတဲ့ရောဂါတစ်ခုပါ။…